"The Extraordinary Dreams of an Ordinary Guy"
Posted by ဗျတ်ဇ at 9:40 PM2ယောက်ကဒီလိုမှတ်ချက်ပေးတယ်။
စဉ်းစားချင်.ချိန်ခြင်း ဆိုတာ ဘ၀မှာ တကယ်.ကို ရှိသင်.တဲ.အရာတစ်ခု ဖြစ်ပေမယ်. လိုအပ်တာထက် ပိုသွားမယ်ဆိုရင် တွေဝေခြင်း မပြတ်သားခြင်းဆိုတဲ. မနှစ်မြို.စရာ နယ်ပယ်ထဲကို ချဉ်းနင်းဝင်ရောက် သွားလေ.ရှိတယ်။ တွေဝေတယ်ဆိုကတည်းက အဲဒီလူတစ်ယောက်ဟာ အမှန်ကိုသိမြင်နိုင်စွမ်း နည်းပါးနေတယ် ၊ စိတ်စွမ်းအင်နည်းပါးနေတယ်၊ သူရဲဘောကြောင်နေတယ် ၊ မသိခြင်းမှာ နစ်မွန်း နေတယ်လို. ယေဘုယျသုံးသပ်လို.ရတယ်။ စဉ်းစားချင်.ချိန်ပြီးပြီ ၊ အရာရာကိုထောင်.စေ.အောင် ကြည်.ပြီး ပြီဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ကို ချရတာပါပဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင် အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတွေးထဲမှာပဲထားရုံနဲ.တော. ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးး။ လက်တွေ.အကောင်အထည်ဖော်မှသာ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို. မည်ပါတယ်။ တွေဝေခြင်း ဆိုတဲ.စကားလုံးကို လူတွေက အကောင်းဘက်ကိုပြောတဲ. စကားလုံးမဟုတ်တာ သိကြသလို ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားခြင်း ဆိုတဲ. စကားလုံးဟာ အကောင်းဘက်က စကားလုံးဖြစ်မှန်း နားလည်ကြပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက် ပြောဖူးတယ်။ ဘ၀ဆိုတာ ရွေးချယ်မှုတွေနဲ.ပြည်.နှက်နေတဲ.အရာတစ်ခုပဲတဲ.။ ဘ၀မှာ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် တစ်ခုခုကိုတော. ရွေးချယ်နေကြရတာချည်းပါပဲ။ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ. အရာတစ်ခုကိုတော. ခိုင်မာတဲ. ရည်ရွယ်ချက်နဲ. မဆုတ်မနစ်လုပ်ဖို.ပဲလိုပါတယ်။ Second Thought ဆိုတဲ. ဒုတိယအတွေးဟာ အရာခပ်သိမ်းမှာ မမှန်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ကိုယ်က မှန်ပြီထင်လို.ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ. ပထမအတွေးက လည်း မှန်ချင်မှမှန်နိုင်ပါတယ်။ မှားသွားခဲ.ရင်လည်း အဲဒီအမှားအပေါ်မှာ သင်ခန်းစာယူ ၊ ကိုယ်.ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာ တာဝန်ယူတာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ်.မယ်။ အရာရာ ဟာ ကိုယ်.စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်လို. မျှော်လင်.လို.မရပါဘူး။ ငါတစ်သက်လုံး ဆုံးဖြတ်ခဲ.သမျှ အရာအားလုံး မှန်ခဲ.တယ်ဆိုတဲ. လူတစ်ယောက်မှမရှိပါဘူး။ အခြေအနေအချိန်အခါ ပေါ်မှာမူတည်ပြီး အကောင်းမွန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချရတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါက ဆောင်းပါတစ်ခုမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဇန်န၀ါရီလ မှာ အမေရိကန်က ပစ္စည်းတစ်ခု ကို တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ရုရှားက အဲဒီပစ္စည်းဟာ လွန်ခဲ.တဲ. ၁၀ နှစ်လောက်ကတည်းက သူတို.တွေ.ထားခဲ.ပြီးပြီလို.ကြေငြာတယ်။ အဲဒီမှာ အားလုံးဇဝေဇ၀ါတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီပစ္စည်းကိုဈေးကွက်တင်မလားမတင်ဘူးလား တုံ.ဆိုင်းနေခဲ.ကြတယ်။ နောက်နှစ်လလောက်နေတော. တရုတ်က အမေရိကန်ကို အဲဒီပစ္စည်းတွေ စပြီးတင်သွင်းဖြန်.ချီပါတော.တယ်။ ကိုယ်.လိုပဲ မှန်ကန်တဲ. ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ. သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း သံသယ မရှိပါနဲ.။ ဟိုဟာလားဒီဟာလား အကြိမ်ကြိမ်အလီလီ တောင်တောင်အီအီ စဉ်းစားနေရင်း အရာရာမှာတွေဝေနေမယ်ဆိုရင် နောက်ကျခြင်းကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာတွေ.ဆုံသွားရနိုင်ပါတယ်။
ငါတော. ဒါလုပ်ရမယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရလိမ်.မယ် လို.အခုနေပြောပြီး ခဏနေမေ.သွားတဲ. လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ အရာရာမှာတွေဝေ ငေးငိုင်ပြီး မှတ်ချက်တွေပဲ ပေးနေတတ်တဲ. လူတွေလည်းရှိတယ်။ ကိုယ်ပြုပြင်ဖန်တီးယူလို. မရနိုင်တဲ. အရာတွေအပေါ်မှာ အမြဲတမ်းအဆိုးမြင် ပြီး မကောင်းတဲ. မှတ်ချက်တွေ ပေးနေရုံကလွဲလို. ဘာတစ်ခုမှ ထမလုပ်တဲ.လူတွေလည်းရှိတယ်။ စတီဖင်ကိုဗေးက ပြောတယ် ကိုယ်ပြုပြင်ဖန်တီးလို.မရတဲ.အရာတွေအကြောင်းကို မပြောပါနဲ.တဲ.။ ကိုယ်လက်လှမ်းမှီသလောက် ကိုယ်ပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်သလောက်သာ အာရုံစိုက်လိုက်ပါတဲ.။ လူတွေဟာ အတွေးကို အတွေးထဲမှာ ပဲထားတတ်ကြတယ်။ အပြင်ကိုထုတ်ပြီး အစပြုဖို.ကို ၀န်လေးကြတယ်။ကိုယ်ကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီး ၊ ကိုယ်.ဦးနှောက် အတွေးအခေါ်လေးတစ်ခု ပေါ်မှာ ပဲ မူတည်ပြီး အခြားအရာတွေကို မကောင်း ပြောတတ်ကြတယ်။ သူတစ်ပါးက အစပြုထားတဲ.အရာတွေအပေါ်မှာ လည်း အကောင်းမြင်စိတ်နဲ. ကြည်.ဖို. ၀န်လေးတတ်ကြတယ်။ အဲဒါဘာလုပ်မှာလည်း ဆိုတဲ. အတွေးက အဲဒီလိုလူတွေရဲ. ခေါင်းထဲမှာ အရင်ဆုံးပေါ်လာလေ.ရှိတယ်။ အခြားသူတွေဟာ ကိုယ်.ထက် လုံ.လ ၀ီရိယ၊ညဏ်ပညာ ဗဟုသုတ ပိုရှိ ကောင်းရှိလိမ်.မယ်ဆိုတဲ.အချက် ကို လျစ်လျူရှူ ပြီး ကိုယ်.ကိုကိုယ် အထင်ကြီးနေတတ်ကြတယ်။ ဖြစ်လာမှ တုံ့ပြန်ခြင်းထက် အခြေအနေကိုဖြစ်အောင် ဖန်တီးယူ နိုင်တဲ. စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ.သူတွေကို Proactive ဖြစ်တယ်လို. ဆိုတယ်။ များသောအားဖြင်. အစပြုဖို.၀န်လေးတဲ. လူတွေဟာ ဖြစ်လာမှတုံ.ပြန်တတ်တဲ. Reactive စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ.သူတွေဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဦးမဆောင်နိုင် ၊ သူများဦးဆောင်တာကိုလည်း အကောင်းမမြင်နိုင် ၊ ဘေးထိုင်ဘုပြောတဲ. သူတွေဖြစ်လာတယ်။ Responsibility ကို နှစ်ခြမ်း ခွဲထုတ်ကြည်.လိုက်ရင် Response နဲ. Ability ဆိုတဲ. စကားလုံးနှစ်လုံးကိုတွေ.ရမယ်။ တုံ.ပြန်မှု နဲ. စွမ်းရည် ကိုပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်လို. အကြာင်းအရာ တစ်စုံတစ်ခု ၊ အဖြစ်အပျက်တစ်စုံတစ်ခု ၊ ကိစ္စရပ်တစ်စုံတစ်ခု အပေါ်မှာ တုံ.ပြန်နိုင်တဲ. စွမ်းရည်ရှိခြင်းကို တာဝန်ယူခြင်း လို. သဘောရတယ်။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုခု ကို အစပြုဖို. အားမသန်တဲ. သူတစ်ယောက်ဟာ တာဝန်ယူနိုင်မှုမှာ လည်းအားနည်းလာမှာအမှန်ပါပဲ။ တာဝန်ယူဖို. နေနေသာသာ တာဝန်ကိုတောင်မသိတဲ. လူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Genius is 99% of perspiration and 1% of inspiration လို. အက်ဒီဆင်က ပြောတယ်။ အရာရာမှာ တွေးနေရုံ မှတ်ချက်တွေချနေရုံ နဲ. မပြီးပါဘူး။ တစ်ခုခု ကို အစပြုလှုပ်ရှားပါ။ သူများအစပြုထားတဲ.အရာတွေအပေါ်မှာ လည်း အဆိုးမြင်တဲ.အကြည်.နဲ.မကြည်.ပါနဲ.။ လေးစားသင်.ရင်လေးစားပါ ၊ အားကျသင်.ရင်အားကျပါ၊ အတုယူသင်.ရင် အတုယူပါ ၊ မကောင်းဘူးထင်ရင် သင်ခန်းစာယူပါ။
Posted by ဗျတ်ဇ at 8:56 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမှတ်ချက်ပေးတယ်။
The Clash of Titans ကော Percy Jackson ကောကြည်.ပြီးပြီ။ နှစ်ကားစလုံးက ဂရိ ဒဏ္ဍာရီ သူရဲကောင်း ပါးဆီးယတ်စ်အကြောင်းကိုအခြေခံထားတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် အဲဒီနတ်ဘုရားတွေအကြောင်း ဘာမှနားမလည်တော. ကြည်.ရတာ အူလည်လည်နဲ.။ သိပ်မကျေနပ်တာ နဲ. နတ်ဘုရားအကြောင်းတွေ အင်တာနက်မှာလက်လှမ်းမှီသလောက် ရှာဖတ်ပြီးမှ အခွေပြန်ကြည်.ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒါမှပဲ ဒီနတ်ဘုရားတွေအကြောင်း သိတော.တယ်။ သူတို. ဂရိတွေရဲ. နတ်ဘုရားဒဏ္ဍာရီတွေက အတော်ထူးဆန်းတယ်။ ရယ်လည်းရယ်ရတယ်။ ကလေးဆန်တာလဲပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖို.တော. တော်တော်ကောင်းတယ်။ ဂရိတွေက ကြံကြံဖန်ဖန် ပြောလည်းပြောတတ်တယ်။ များလိုက်တဲ.ဆွေမျိုးဆိုတာကလည်းမပြောပါနဲ.တော.။ ပြီးရင် ဆွေမျိုးအချင်းချင်း၊ မောင်နှစ်မအချင်းချင်းလည်း ပြန်ယူကြသေးတယ်။အံ.ရော။ သူတို.ဒဏ္ဍာရီ လေးကို သိထားရင်တော. အဲဒီဇတ်ကားတွေကို ကြည်.ရတာပိုကောင်းတာပေါ.။
ဒီကမ္ဘာကြီးမရှိခင် ၊ နေတွေလတွေ နေ.တွေညတွေ မရှိခင်တုန်းက ခေးရော.စ် ( Chaos ) ဆိုတာပဲရှိတယ်။ ဟာလာဟင်းလင်းကြီးပေါ.။ ဘာမှအစီအစဉ်တကျမရှိပဲ ဟင်းလင်းပြင်ကြီးပေါ.။ အဲဒီဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာမှ အီရေဘတ်စ် ( Erebus ) ဆိုတဲ. နတ်ဘုရားတစ်ပါး ပေါ်ထွက်လာတယ်။ သူနဲ.အတူ သေခြင်းတရား နဲ. ည က နေထိုင်တယ်။ နောက် တိတ်ဆိတ်မှု ၊ နတ္တိ၊ အဆုံးမဲ.ခြင်း၊ အမှောင် စတာတွေလည်းရှိတယ်။ အဲဒီလိုနေရင်းနဲ. အော်တိုမစ်တစ်ပဲ သူ.ဆီမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားဆိုတာ ပေါ်ထွက်လာခဲ.တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား လည်းပေါ်ထွက်လာရော ၊ အလင်းရောင် ရယ် နေ. ရယ်ဆိုပြီးပေါ်လာပြန်တယ်။ အဲဒီ အလင်းရောင် နဲ. နေ. တို.လည်း ပေါ်လာရော ဂေယာ (Gaea) ဆိုတဲ. နတ်ဘုရားမတစ်ပါး က တခါပေါ်ထွက်လာပြန်ရော ။ဂေယာဆိုတာ အမှန်ကတော. The earth, ကမ္ဘာမြေကြီးပါပဲ။ အဲဒီဂေယာ က တစ်ခါ အလကားနေရင်းနဲ. ယူရေးနပ်စ် ( Uranus ) ဆိုတဲ. နတ်ဘုရားကို မွေးဖွားခဲ.ပါတယ်။ ယူရေးနပ်စ် က ကောင်းကင်ဘုံကို အစိုးရပါတယ်။
ဆရာသမား ယူရေးနပ်စ် က သူ.အမေ ဂေယာ နဲ.ပြန်ညားပြီးသကာလ ပထမဦးဆုံး သားသုံးယောက်မွေးတယ်။ Hecatoncheires လို.ခေါ်တဲ. အဲဒီသားတွေမှာ ခေါင်းငါးဆယ်စီရှိရှိပြီး လက် တစ်ရာစီရှိတယ်။ ယူရေးနပ်စ် က ဖခင်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး၊လင်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ သူမွေးတဲ.သားတွေက သူ.ကိုပြန်ရန်လုပ်မှာကြောက်တယ်။ဒါနဲ.ပဲ သူ.သားသုံးယောက် ကို သူ.အမေ ဂေယာရဲ. ဗိုက်ထဲကို ပြန်ထည်.ပြီး ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားလိုက်တယ်။ရှင်မွေးလွန်း ဂေယာက နောက်တစ်ခါ သားသုံးယောက်ထပ်မွေးပြန်တယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ. နဖူး အလယ်ဗဟိုတည်.တည်.မှာ မျက်လုံးတစ်လုံးစီပါတယ်။ ခွန်အားဗလ အရမ်းကောင်းကြတယ်။ သူတို. ကို Cyclopes တွေလို.ခေါ်တယ်။အဖေကြီး ယူရေးနပ်စ် က ဒီတစ်ခါလည်း သူ.သားတွေက ရန်လုပ်မှာစိုးတယ် ဆိုပြီး ဟိုးငရဲအောက်ဖက်ထက်နက်တဲ.နေရာ ဖြစ်တဲ. Tatarus ( ငရဲလိုဏ်ဂူ) ကိုပို.လိုက်ပြန်တယ်။ တစ်ခါ ရှင်မွေးလွန်း ဂေယာက နတ်ဘုရား ခြောက်ယောက် ၊ နတ်ဘုရားမ ခြောက်ယောက် ပါတဲ. ဆယ်နှစ်မွှာပူး ကိုမွေးပြန်ပါတယ်။ အံ.ရော။ သူတို. ဆယ်.နှစ်ယောက်ကို တိုက်တန် (Titans) နတ်ဘုရားတွေလို.ခေါ်ပါတယ်။သူတို.ဟာ လူပုံစံတွေဖြစ်ကြတယ်။ အောက်မှာသူတို.ရဲ. နာမည်တွေပါတယ်။
ဒီတစ်ခါ လည်း အဖေကြီး ယူရေးနပ်စ် က သူ.သားသမီးတွေက သူ.ကို ရန်ပြုမှာပဲဆိုပြီး သူ.အမေရဲ. ဗိုက်ထဲကို ထည်.ပြီး ထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ မှာ အမေကြီး ဂေယာက တင်းသွားတယ်။ သူကမွေးလိုက်ရင်း ဟို က ပြန်ထည်.လိုက်ရင်းဆိုတော. တင်းလာတာပေါ.။ ဒါနဲ. ယူရေးနပ်စ်ကို လုပ်ကြံဖို.အကွက်ကို သူစောင်.တယ်။ သူ.သားတွေကို သူ.ဗိုက်ထဲက နေတိတ်တိတ်လေး ယူရေးနပ်စ်မသိအောင်ထုတ်တယ်။ ပြီးတော. ယူရေးနပ်စ် ကို လုပ်ကြံဖို.တိုင်ပင်တယ်။ ကျန်တဲ. သူတွေအားလုံးက မလုပ်ရဲကြပေမယ်. အငယ်ဆုံးသား ခရောနပ်စ် (Cronus) ကလက်ခံခဲ.တယ်။ သူ.အဖေ ယူရေးနပ်စ်ရဲ. လိင်အင်္ဂါကို အိပ်ပျော်နေတုန်း ကျောက်တံစဉ်နဲ. ဖြတ်ပစ်ပြီးသတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော. သမုဒ္ဒရာထဲကို လွှင်.ပစ်လိုက်တယ်။ သူမသေခင်မှာ ခရောနပ်စ် နဲ. တိုက်တန်တို. ကိုအပြစ်ဒဏ်ခံစေရမယ်လို. ပြောခဲ.ပါတယ်။ ခရောနပ်စ် ကို မင်းလည်း တနေ. ငါ.လို ခံစားရလိမ်.မယ် လို. ကျိန်စာတိုက်ခဲ.တယ်။ သူ.လိင်အဂါင်္ကျသွားတဲ. သမုဒ္ဒရာရေမြုပ်တွေက နေပြီးတော. အပရိုဒိုက် (Aphrodite) လို.ခေါ်တဲ. အချစ်နတ်ဘုရားမ ဖြစ် လာပါတယ်။
ခရောနပ်စ် က သူ.အမ ရီယာနဲ.လက်ထပ်ပြီး ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ သူ.အကို Cyclopes တွေနဲ. Hecatoncheires တွေကို တားတရပ်စ် ကို ပို.လိုက်ပြန်တယ်။ ခရောနပ်စ်နဲ. ရီယာတို. ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်အုပ်စိုးကြပြီး ကလေးအများကြီးရခဲ.တယ်။ ဒါပေမယ်. ခရောနပ်စ် ဟာ သူ.အဖေကို သူ ကနန်းချခဲ.သလိုမျိုး သူ.သားသမီးတွေ ကလည်း သူ.ကို နန်းချမယ်လို.ယုံကြည်ခဲ.တယ်။ သူ.အဖေရဲ. ကျိန်စာကို လည်းတွေးကြောက်တယ်။ တစ်ရက်မှာ သူ.ဇနီး ရီယာ က ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်လို.ပြောတယ်။ ကလေးတွေကို အရွယ်ရောက်သည်အထိ ကြီးပြင်းခွင့်မပေးလျှင် သူ့ကိုရန်ပြုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဘူး လို. စဉ်းစားမိတယ်။ဒါနဲ. သူ.မိန်းမ ရီးယာ ပထမကလေးမွေးဖွားတဲ.အချိန်မှာ သူဟာ အမြန် ကောက်ယူလျက်မြိုချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ခရောနပ်စ်ဟာနောက်ထပ်မွေးဖွားလာတဲ. ကလေး ငါးယောက်ကိုလည်း မွေးလာတိုင်း မြိုချပစ်ခဲ.တယ်။ ခြောက်ကြိမ်မြောက် ကလေးမွေးဖွားတဲ.အချိန်မှာ ရီးယာဟာ ကလေးမွေးဖွားပြီးလို.ပြောပြီး ကျောက်တုံးတစ်တုံးကို အ၀တ်ပတ်ပြီး ကိုင်ထားတယ်။ ခရောနပ်စ် ကလည်း အရင်အခေါက်တွေတုန်းကလို ပဲ အ၀တ်ပတ်ထားတဲ. ကျောက်တုံးကို ကလေးမှတ်ပြီးမျိုချလိုက်တယ်။ ကြည်.တောင်မကြည်.ဘူး။ အမှန်က ရီယာဟာ Crete ဆိုတဲ. ကျွန်းမှာ ကလေးကိုသွားမွေးထားခဲ.ပြီး ကလေးကို ဇုစ် (Zeus) လို.နာမည်ပေးထားခဲ.တယ်။
ဇုစ်ကို ဆိတ်တစ်ကောင်ကနို့တိုက်ပေးပြီး Nymph လို.ခေါ်တဲ.နတ်အချို့က ကျွေးမွေးစောင်.ရှောက်ခဲ.ကြတယ်။ ဇုစ် ဟာ အဲဒီ ခရိ ကျွန်းပေါ်က ဒခ်တေတောင် (Mount Dikte )ပေါ်မှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ.တယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ. ဇုစ် ဟာ သူ.အဖေခရောနပ်စ် ကို ဘယ်လို အနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကို လှည်.စားမှုနတ်ဘုရားမ Metis မက်တစ်စ် နဲ. တိုင်ပင်တယ်။ မက်တစ်စ် က သောက်လိုက်တဲ.အခါ ပျို.အန်နိုင်စေတဲ. ဖျော်ရည်တစ်မျိုးကို ဖန်တီးပေးလိုက်တယ်။ အမေလုပ်တဲ.သူ ရီယာက နန်းတော်ထဲမှာ သူ.သား ကို ဘုရင်. ဖျော်ရည်တော်ဆက် အစေခံတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ.တယ်။ အခွင်.အရေးရတဲ.တစ်နေ.မှာ ဇုစ်ဟာ အဲဒီဖျော်ရည်ကို သူ.အဖေ ခရောနပ်စ် ကိုဆက်လိုက်တယ်။ ခရောနပ်စ် က ဖျော်ရည်ကို သောက်ပြီးတဲ.အခါ အန်တယ်။ အ၀တ်ပတ်ထားတဲ. ကျောက်တုံးကို အရင် အန်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော. အရင် ကမြိုချထားခဲ.တဲ. ကလေးတွေကိုလည်း အန်ထုတ်လိုက်တယ်။ ကလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ အဖြစ်နဲ. သူ.တို.ရဲ. အဖေဗိုက်ထဲကနေ ပြန်ထွက်လာကြတော.တယ်။ အဲဒီကလေးတွေကတော. ပိုဆိုက်ဒန် (Poseidon)၊ ဟေးဒီးစ် (Hades)၊ ဒေမီတာ (Demeter) ဟက်စတီယာ (Hestia) နဲ. ဟေရာ (Hera) တို့ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို.အားလုံး ဟာ သူတို.အဖေကြီး ခရောနပ်စ် ပျို့အန်နေ
တုန်းမှာ ထွက်ပြေးခဲ.ကြပြီး ဇုစ်ကိုပဲ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ.ကြတယ်။ သူတို.ဟာ အိုလံပက်စ်တောင် Mount Olympus မှာသွားပြီးအခြေချနေနိုင်ခဲ.ကြတဲ.အတွက် သူတို.ကို အိုလံပီယန် နတ်ဘုရား (Olympian Gods) တွေလို.ခေါ်ပါတယ်။
ခရောနပ်စ်ဟာ တခြားရှိနေတဲ. တိုက်တန်နတ်ဘုရားတွေနဲ. ပူပေါင်းပြီး အိုလံပီယန် နတ်ဘုရားတွေနဲ. စစ်ခင်းခဲ.တယ်။ တိုက်တန်နတ်တွေဘက် က Iapetus နတ်ဘုရားဆီမှာ အက်တလပ်စ် (Atlas), ပရိုမီးသီးယပ်စ် (Prometheus) နဲ. အက်ပီမီးသီးယပ်စ်(Epimethius)ဆိုတဲ. သားတော်သုံးယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီသားသုံးယောက်ထဲက ပရိုမီးသီးယပ်စ် (Prometheus) နဲ. အက်ပီမီးသီးယပ်စ်(Epimethius) တို.ဟာ အိုလံပီယန် နတ်တွေနဲ.လာပူးပေါင်းပြီး ၊ အက်တလပ်စ် (Atlas) ကတော. တိုက်တန်တွေဘက် က ဦးဆောင်တဲ. နတ်ဘုရားစစ်သူကြီးဖြစ်ခဲ.တယ်။ ပရိုမီးသီးယပ်စ် ရဲ. နာမည်ဟာ “ကြိုတင်တွေးခေါ်သူ” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပြီး အနာဂတ်ကို ကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ. အစွမ်းရှိတယ်။ သူဟာ နောက်ဆုံးမှာ တိုက်တန်နတ်တွေ ရှုံးနိမ့်မယ်ဆိုတာကို သိတဲ.အတွက် အိုလံပီယန် နတ်တွေနဲ. လာပူးပေါင်းတာဖြစ်တယ်။ တိုက်တန်တွေ က တကယ်. နတ်ဘုရား စီနီယာ ကြီးတွေဆိုတော. အိုလံပီယန် နတ်တွေကို နိုင်ခြေရှိတယ်။ ဒါပေမယ်. ဇုစ် ကလိမ္မာပါးနပ်တယ်။ ခရောနပ်စ်က တားတရက်စ် ကို နယ်နှင်လိုက်တဲ. Cyclopes နဲ. Hecatoncheires တွေကို လွတ်အောင်လုပ်ပေးပြီး သူတို.နဲ.ပူးပေါင်းခိုင်းတယ်။ ဇုစ် အတွက် ၀ရဇိန် လက်နက်ကို Cyclopes တွေက ဖန်ဆင်းပေးခဲ.တယ်။ ပိုဆိုက်ဒန် (Poseidon) အတွက် Trident လို.ခေါ် တဲ.သုံးခွချွန်လှံ ကို ဖန်ဆင်းပေးခဲ.တယ်။ ဟေးဒီးစ် (Hades) အတွက် ကိုယ်ပျောက် ဦးထုပ်ကို ဖန်ဆင်းပေးခဲ.တယ်။ အရမ်းပြင်းထန်တဲ. တိုက်တန်တွေနဲ. အိုလံပီယံနတ်တွေရဲ. တိုက်ပွဲမှာ လက်တစ်ရာ နဲ. ခေါင်း ငါးဆယ်စီ ရှိတဲ. Hecatoncheires တွေက ကျောက်တုံးကြီးကြီးတွေကို ကိုင်ထားပြီး ချုံခိုစောင်.တယ်။ တိုက်တန်နတ်တွေလာတဲ.အခါမှာ အဲဒီကျောက်တုံးတွေကိုပစ်ချတယ်။ တိုက်တန်နတ်တွေဟာ သူတို. အပေါ်ကို တောင်ကြီးပြိုကျလာတယ်ထင်ပြီး ထွက်ပြေးကြတယ်။အဲဒီမှာ ဇုစ် တို.ရဲ. အိုလံပီယန် နတ်တွေဟာ အနိုင်ယူ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ.ပါတယ်။ တိုက်တန်နတ်တွေအားလုံးကို ဇုစ်က တားတရက်စ် ကို ပို.ပြီး လိုဏ်ဂူထဲမှာ ပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ စစ်သူကြီး အက်တလပ်စ် (Atlas) ကိုတော. အားလုံးထက် ကြီးတဲ. အပြစ်အနေနဲ. ကမ္ဘာကြီးကို ထမ်းခိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲတွေပြီး အားလုံးငြိမ်းချမ်းသွားချိန်မှာ ဟေးဒီးစ် (Hades) ဟာ ယမမင်းဖြစ်လာပြီး မြေအောက်ကမ္ဘာနဲ. ငရဲကို အစိုးခဲ.တယ်။ ပိုဆိုင်ဒန် (Poseidon) ဟာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတို့ကို ပိုင်တဲ. ရေနတ်ဘုရားဖြစ်လာတယ်။ ဆရာကြီး ဇုစ် (Zeus) ကတော. နတ်ဘုရားအားလုံးတို.ရဲ. ဘုရင်ဖြစ်ခဲ.ပြီး မိုးကောင်းကင် ကို အစိုးရခဲ.တယ်။ အဲဒီအချိန်အထိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နတ်ဘုရားတွေသာ အုပ်စိုးပြီးနေထိုင်ခဲ.ကြတယ်။ လူတွေမရှိသေးဘူး။
Posted by ဗျတ်ဇ at 11:23 AM3ယောက်ကဒီလိုမှတ်ချက်ပေးတယ်။
Think Green , Live Green
ရုပ်ရှင် မိတ်ဆက် (2)
အလေ.အထ (၇) ရပ် (2)
ဒူဘိုင်း, အယ်လ်ကွတ်ဇ်, United Arab Emirates
Perfect Success မဂ္ဂဇင်း
ရနံ.တစ်ုခတည်းမွှေးပျံ. သော အရောင်စုံပန်းပွင်.များ
မငုံ - ကန္တာရ မိုးစက်များ
ငြိမ်းစု - လှုပ်ရှားနေသောမိုးကောင်းကင်
သူတို.ရဲ. လတ်တလော အတွေးအရေး